डा. विमल अग्रवाल जीवितै फर्केलान् ?
डा. विमल अग्रवाल जीवितै फर्केलान् ?
आइतबार २९, बैशाख २०७६
विराटनगर । विराटनगरका डाक्टर बिमल अग्रवाल गत बुधबार गाडी चलाउँदै नोबेल अस्पताल गए । आफ्नो जाँच गराउँदा गराउँदै अचानक बिरामी भए । अहिले उनी त्यही अस्पतालको भेन्टिलेटरको एउटा बेडमा अचेत छन् । स्वास र मुटु चलिरहेको छ, मस्तिष्कले काम गर्न छाडेको छ ।
आफै गाडी चलाएर अस्पताल पुगेको मानिस कसरी अचानक कसरी बिरामी हुन्छ ? बिराटनगरका विभिन्न अस्पतालमा बारम्बार यस्तो घटना दोहोरिरहेको छ । सारसौदो मानिस बिरामी भएर फर्किन्छ । तर कुनै ठूलो चमत्कार भएन भने डाक्टर बिमल शायद कहिल्यै फर्कन पाउने छैनन् ।
छाती भारी भएपछि आफै गाडी चलाएर श्रीमतीसहित अस्पताल पुगेका अग्रवालको इसिजी गर्दा केही असहज देखिएपछि डा. अग्रवालको एन्जिओप्लास्टिक र इको गरिएको थियो । त्यसपछि एन्जिओप्लास्टिक गरिएको थियो । जसमा उनको मुटुको धमनीमा अवरोध देखिएको थियो ।
तर एन्जिओप्लाष्टिक गरिएलगत्तै उनी बिरामी भएर अचेत भए । उनलाई मस्तिष्कघात भएको एमआरआइबाट पत्ता लागेको थियो । डा. अग्रवालको उपचारको क्रममै मस्तिक्क घात भएको र जिवीतै फर्किने आशा निकै कम भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । उनको मुटु र स्वास चलिरहेको छ, तर मष्तिष्क पुरै ड्यामेज भएको बताइएको छ ।
डा. अग्रवालको उपचार यतिखेर विराटनगरका दर्जनौ विशेषज्ञ डाक्टरको निगरानीमा भेन्टिलेटरमा राखेर भइरहेको छ ।
उपचारमा नोबेल अस्पतालका डाक्टरहरुले लापरवाही गरेको बिरामीका आफन्तहरुको आरोप छ । उता, नोवेल अस्पतालका चिकित्सकहरुले भने उपचारमा लापरवाही नभएको दाबी गरेका छन् ।
अवस्था झनै जटिल बनेपछि विराटनगर बाहिर लाने अवस्था पनि नभएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । विराटनगरमा एयर एम्बुलेन्सको उडान अनुमति नभएका कारण पनि डा. अग्रवाललाई भारतका ठूला अस्पतालमा लान सकिएको छैन ।
धेरै बालबालिकाको उपचार गरेर ख्याती कमाएका डा. अग्रवाल अहिले अस्पतालको बेडमा मृत्यु कुरीरहेका छन् । उनी फेरी जीवित हुन सक्छन् अनि फेरी बिरामी जाँच्न सक्छन् । त्यसको लागि ठूलै चमत्कार हुनुपर्छ ।
भोजपुरमा परेको चट्याङले छ जना घाइते, दुई चौपाया मरे